Manjaro 21.1.3 inosvika iine vhezheni itsva yePamac yakarongeka | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 21.1.3 (2021-09-16) inosvika neshanduro nyowani yaPamac zvakarongeka uye Pacman 6.0.1
Vakanga vazvizivisa pasocial network nguva dzakapfuura uye isu tatova nazvo pano. Asingasviki mavhiki maviri mushure yapfuura kugadzirisa, timu yevagadziri kuseri kwechimwe chakakurumbira Arch Linux-based distributions ichangoburitswa Manjaro 21.1.3, YaPavho yechitatu poindi yekuvandudza (uye pese pandinoverenga kodhi iyi ndinonzwa kusanzwisisika). Nguva pfupi yapfuura vaive vaisa mapakeji nyowani kunzvimbo dzepamutemo dzeyakagadzika vhezheni 2021-09-16, uye mune ese maviri mamiriro chinhu chitsva chinosanganisirwa chinomira kunze kwevamwe.
Pamac 10.2 Yatove yepamutemo, uye iko kushanduka kuri pachena. Manjaro nyowani software centre yakashambidzika, uye pazvinogoneka inoratidza zvimwe zvirimo mune akazara matatu matatu, maviri e software uye imwe yesarudzo, kana kuruboshwe pane. Asi patinodzvanya pane pasuru, ruzivo rwayo runoonekwa kurudyi, hunhu hwakasiyana nehwekare hwaive neruzivo irworwo rwese.
Pfungwa dzeManjaro 21.1.3
Mazhinji emeso akagadziridzwa, nyowani iri Linux 5.14.2.
Pipewire ikozvino yava pa0.3.35.
Iyo yakagadzikana (ichiripo) vhezheni yeLibreOffice ikozvino yava pa7.1.6.
Pamac ikozvino yave pa10.2.0, iyo yakambokoshesa desktop. Ye mobile starter pamac-maneja ine -Mobile switch.
Pacman ikozvino pa6.0.1.
Mutengi weSteam akagadziridzwa kugadzirisa nyaya dzazvino dzinozivikanwa.
Systemd ikozvino iri pa249.4.
Zvimwe zvinogadziridzwa, zvakaita seaya enzvimbo dzakasiyana dzemifananidzo uye madhesiki, uye muiyo KDE vhezheni Yemaficha 86 yatovepo.
Manjaro 21.1.3 zviri pamutemo, asi izvozvi havasati vavandudza peji rewebhu kurodha pasi maSOO matsva kubva ipapo. Pane zvimisikidzwa zvekuburitsa muzvinyorwa zviviri nezve izvi zvaburitswa (21.1.3 na2021-09-16) pa izvi y iyi imwe link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Manjaro 21.1.3 (2021-09-16) inosvika neshanduro nyowani yaPamac zvakarongeka uye Pacman 6.0.1
Ini ndinonzwa kunzwa kuti iyo Manjaro inogadziridza yakanyanya kuwanda. Mune ino ini ndaive nezvikanganiso zviviri, imwe ine chekuita nekiyi yeese arch uye manjaro, ipapo pandakatangazve ini ndaive nekanganiso kuyedza kunyora kana kuverenga kunze kwe disk hd0. Zvinoenderana neforamu yeichi chigadziriso, dambudziko nemakiyi riri maererano nevamwe vanogadzira pane timu vakapera; chinetso chisina kugadzikana kana tikaramba tichifunga kuti Manjaro haisisiri chaiyo chirongwa pakati pevanofarira vanogadzira, asi Kambani Inopindirwa.
FreeOffice 7.2.1, yekutanga diki yekuvandudza mune ino nhevedzano inogadzirisa 87 bugs